ညမင်းသား: Feb 12, 2013
Itchy penis ပန်းအဖျား ယားခြင်း
ကျွန်တော့် အသက်ကတော့ ၂၆ နှစ်ထဲမှာပါ။ လူပျို လူလွတ် တစ်ယောက်ပါ ခုချိန်ထိအောင် ဘယ်မိန်းကလေးနဲ့မှလဲ ဆက်ဆံခြင်း မရှိခဲ့ဖူးပါဘူး။ ကျွန်တော်ရဲ့ မွေးရာပါထိပ်ဖျား အတွင်းပိုင်း အရေခွံ နေရာလေးတွေမှာ မကြာခဏဆိုသလို ယားယံခြင်း၊ ခြေမိလျင် အနဲငယ် ရောင်ရမ်းခြင်း၊ ပွန်းပဲ့သော ဒဏ်ရာကဲ့သို့ ပူစပ်ပူစပ်ဖြစ်ခြင်း၊ ပူစပ်စပ်ဖြစ်တဲ့အခါ အရေပြားလေးတွေ တစ်ချို့ နေရာတွေမှာ အက်ကွဲကြောင်းလေးတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။
တစ်ကိုယ်သန့်ရှင်းရေး ညံ့လို့များလားလို့ ဂရုစိုက်၍ သတိထား လုပ်ကြည့်ပါသော်လဲ ပြောင်းလဲ လက္ခဏာ မတွေ့ရသေးပါ။ နေ့စဉ်တော့ မဟုတ် ရက်ခြား ရက်ခြား ဖြစ်ပေါ်ပါတယ်။ တစ်နှစ်နီးပါးမျှ ကြာခဲ့ပါပြီ။ အရင်က ဒီလို မဖြစ်ဖူးပါဘူး။ ဘာရောဂါ ဖြစ်နေမှန်းလဲ မခန့်မှန်းတတ်ပါ။ အစာအာဟာရ ချို့တဲ့၍လား ဆိုတာလဲ မခန့်မှန်းတတ်ပါ။ အင်တာနက် စာမျက်နှာပေါ်မှလဲ လက်လှမ်း မီသမျှ စာများ ဖတ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ မဝေခွဲတတ်ပါဘူး။ ခုချိန်ထိ ဘာဆေးမှလဲ သုံးစွဲခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ ယောက်ျား ပန်းအဖျား ယားတာကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းခံ အစုံကို စာရင်းပြုရရင် -
1. Allergies or Irritants အလာဂျီ၊ = Antihistamine E.g. Citrizine Tablet ဆေးသောက်ပါ။
2. Balanitis ပန်းဖျားရောင်နာ၊
3. Candida infection မှို၊ = Azole, Miconazole, Tioconazole, Clotrimazole, luconazole, Butoconazole, Nystatin, Amphotericin B ဆေးသုံးပါ။
4. Contact dermatitis ထိစပ်မှုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ အရေပြားနာ၊
5. Dermatitis အရေပြားရောင်၊ ယားမယ်၊ နာမယ်။
6. Eczema နှင်းခူနာ၊ နာတာရှည်အရေပြားနာ၊ ဒီနေရာမှာဖြစ်တာ အလွန့်အလွန် ရှားတယ်။ မြင်တာနဲ့ သိသာတယ်။
7. Genital herpes ရေယုံ၊ လိင်တဆင့်ကူးလာတာ များတယ်။
8. Irritation to soap/shampoo ဆပ်ပြာ- ဆပ်ပြာရည်-ခေါင်းလျှော်ရည်နဲ့ မတည့်တာ၊
9. Lichen planus များသောအားဖြင့် ဆေးမတည့်ရာကနေ ဖြစ်ပြီး တခြားနေရာမှာသာ ဖြစ်လေ့ရှိတဲ့ အရေပြားနာတမျိုး၊
10. Peile cancer ကင်ဆာ၊ အနာ-အဖုရှိတယ်၊ ပေါင်ခြံမှာ အကြိတ်ထွက်မယ်။
11. Penile rash အလာဂျီ၊ = Antihistamine E.g. Citrizine Tablet ဆေးသောက်ပါ။
12. Poor hygiene သန့်ရှင်းရေးနည်းလို့၊
13. Psoriasis နာတာရှည် ရောဂါပြီးစနစ် ကမောက်မဖြစ်ရာက အရေပြားနာ၊ တခြားနေရာ ဖြစ်တာများတယ်။ Corticosteroids ပါတဲ့ လိမ်းဆေးသုံးပါ။
14. Psychological/Sexual cause စိတ်၊
15. Pubic lice သန်း၊ = 1% Permethrin Lindane shampoo, Malathion lotion 0.5% Ivermectin
16. Reiter's syndrome ရှားပါးတဲ့ အဆစ်နာနဲ့တွဲနေတဲ့ရောဂါ၊
17. Ringworm (Tinea infection) ပွေး၊ အနားသတ် သတ်တ်မှတ်မှတ်ရှိတယ်။ ယားမယ်။
18. Scabies ဝဲ၊ = Benzyl benzoate လိမ်းဆေး၊
19. STDs (Chlamydia and Herpes Zoster) လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ၊ စနစ်တကျ ကုသပါ။
20. Syphilis ဆစ်ဖလစ်၊ အနာ၊ တခုခုဆင်းတာရှိမယ်။
21. Trichomoniasis လိင်ကတဆင့်ကူးစက်ရောဂါ၊ အရည်ဆင်းမယ်၊ ယားမယ်၊ နံမယ်။ Metronidazole (Flagyl) Tablet စားဆေး၊ Clotrimazole Cream လိမ်းဆေး၊
• Symptoms ရောဂါလက္ခဏာတွေအနေနဲ့ ဖြစ်တဲ့ ပန်းအဖျားမှာ ယားတာပါဘဲ၊ ယားလို့၊ ကုတ်လို့၊ ပွတ်ခြေလို့ နီရဲ-ရောင်ရမ်း လာမယ်။ နဲနဲပါးပါး အရေပြားကွဲမယ်။ ကွဲရာ-ပွန်းရာကနေ ဒုတိယပိုး ဝင်းလာနိုင်တယ်။ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါပေါ့။
• ကျားလိင်အင်္ဂါမှာ ရောင်-ရဲ နေတာကို Balanitis ခေါ်တယ်။ ဂရိစကား ဝက်သစ်ချသီး ကနေလာတာပါ။ သန့်ရှင်းရေးလိုလို့ ဖြစ်တာပါ။
• တခါတလေ လိင်ဆက်ဆံအပြီး ခဏဖြစ်တာမျိုးလည်းရှိတတ်တယ်။ ပျောက်သွားတာပါဘဲ။ အဖေါ် အမျိုးသမီးရဲ့ မိန်းမကိုယ်ထဲက ရှိတဲ့ Thrush (Candida Yeast) မှို နဲ့ မတည့်လို့ပါ။ ကိုယ့်အဖေါ်ကို ဆရာဝန်ဆီလွှတ်ပါ။
• Psoriasis ခေါ်တဲ့ အရေပြားနာ တမျိုးနဲ့လဲ ဆက်စပ်နေတတ်တယ်။ Steroid cream စတီရွိုက်လိမ်းဆေးနဲ့ ပျောက်တယ်။
• ဆပ်ပြာသုံးတာ ဂရုစိုက်ပါ။ စိုးရိမ်ပြီး ပိုးသတ်ဆေးမျိုး ရေချိုးရာမှာ Disinfectant မသုံးသင့်ပါ။ ဖြစ်တဲ့နေရာကို ဆားရေနဲ့ ဆေးတာက ပိုကောင်းပါတယ်။ အတွင်းခံကို ဖွတ်လျှော်တာတောင် ရိုးရိုးဆပ်ပြာကိုသာ သုံးသင့်တယ်။ Biological or enzyme powders တွေ မသုံးသင့်ပါ။
• ကိုယ့်မှာ တကယ် Thrush (Candida Yeast) မှိုရောဂါရရင်တော့ Clotrimazole Antifungal cream လိမ်းဆေး၊ Fluconazole tablet စားဆေး ပေးရမယ်။
• ဆီးချိုရှိ-မရှိ စစ်ပါ၊ ကုသပါ။
• သာမန်ဖြစ်နေတာကို ဆေးအပြင်းစား မလိမ်းပါနဲ့။ သန့်ရှင်းရေး ဂရုစိုက်ပါ။ စိုစွပ်နေတာ မကောင်းပါ။ ယားတာ သက်သက်အတွက် Calamine lotion, Xylocine cream လိမ်းနိုင်တယ်။ ပိုးမဝင်အောင် Betadine, Pivodine, Neomycin, Gentamycin, Cipro လိမ်းဆေး တခုခုလိမ်းနိုင်တယ်။ အရက်ပြန်၊ အိုင်အိုဒင်း မလိမ်းပါနဲ့။
ရောဂါတခုခြင်းအကြောင်း သိဘို့လိုပါမယ်။ ရောဂါ-ဆေး ရေးပြီးသားတွေ ရှိပါတယ်။
နားနှင့်မနာ ဖဝါးနှင့်နာပါရှင့်။ သမီးက အသက် (၂၈) နှစ် အပျိုပါ။ စအိုတ၀ိုက်မှာ ယားယံနေသည်မှာ နှစ်လကျော်လောက် ရှိပါပြီ။ သံချဆေး Albandazone 400mg ကို နှစ်ပတ်ခြားတစ်ခါ သုံးကြိမ် သောက်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် စအိုပတ်လည်တင် မကဘဲ မိန်းမအင်္ဂါ ဘေးနှစ်ဘက်နှင့် အပြင်လမ်းကြောင်းမှာပါ ယားယံနေပါတယ်။ နေ့ရောညပါ ယားနေတာပါ။ အရင် ယားနေတာ အဖြူမဆင်းပါဘူး။ အခု အဖြူဆင်းတာ နှစ်ရက်ရှိပါပြီ။
ကိုယ်ခန္ဓာ ယားယံတဲ့အကြောင်း ၃ မျိုးရေးပြီးပါပြီ။ ဒီတခါ ၄ ခုမြောက်ဖြစ်တယ်။
Anal itching စအိုနေရာယားခြင်းကို ဆေးစာနဲ့ Pruritus Ani လို့ခေါ်တယ်။ ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေမှာ သာမန်ကာ ရှန်ကာ ဥပမာ အစားအသောက်၊ သန့်ရှင်းမှု လိုတာမျိုးတွေပါသလို ဆေးကျကျနနကုမှ ပျောက်မှာလဲပါတယ်။
• Dry skin အရေပြား ခြောက်သွေ့နေခြင်း၊
• Too much moisture အရေပြားစိုထိုင်းမှု များနေခြင်း၊
• Fecal incontinence ဝမ်းမလုံရောဂါ၊
• Overuse of laxatives ဝမ်းနုတ်ဆေး လိုတာထက်ပိုသောက်ခြင်း၊
• Excessive washing ဆေးကြောတာကို လိုတာထက်ပိုလုပ်ခြင်း၊
• Chemical irritants ဆပ်ပြာ၊ သန့်ရှင်းရေးသုံးဆေးရည်၊ ကိုယ်ဝန်တားပစ္စည်း စတာတွေနဲ့ မတည့်ခြင်း၊
• Skin disorders (Psoriasis, Seborrhea, Eczema) အရေပြားနာတွေ ရှိနေခြင်း၊
• Hemorrhoids လိပ်ခေါင်း၊
• Anal abrasions, fissures and fistulas စအိုကွဲနာ၊ ဂရင်ဂျီနာ၊ စအိုဘေး ပွန်းပဲ့နေခြင်း၊
• Food irritants အစားအသောက်၊ ဥပမာ အပူ-အစပ်၊ ခရမ်းချဉ်သီး၊ အချဉ်သီး၊ ချောကလက်၊
• Antibiotics) ပိုးသေဆေးတွေ သောက်နေရခြင်း၊
• Infections (STD) လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ၊
• Pinworms တုပ်ကောင် (သန်ကောင်) ရှိခြင်း၊
• Anal tumors စအို ကင်ဆာ၊
• Anxiety or stress) စိတ်ဖိစီးမှုများခြင်း၊ သောကများခြင်း၊
• အကြောင်းခံကိုရှာပြီး ကုသရမယ်။
• နေရာကို သန့်ရှင်းရေး လုပ်သင့်သလောက် ညင်ညင်သာသာ လုပ်ပါ။ ပြီးတာနဲ့ ခြောက်သွေ့အောင်လုပ်ပါ။ ပေါင်ဒါ ထည့်နိုင်တယ်။ လေမှုတ်ကရိယာ သုံးနိုင်တယ်။ (တစ်ရှူး-ပေပါ) သုံးနိုင်တယ်။
• (တစ်ရှူး-ပေပါ) အမျိုးအစား ပြောင်းသုံးပါ။
• ဝမ်းချုပ်တာ၊ ဝမ်းပျက်တာ ကုသပါ။
• အတတ်နိုင်ဆုံး မကုပ်ပါနဲ့။ ရေအေး၊ ရေနွေး သုံးကြည့်ပါ။
• (ကော်တွန်) အောက်ခံသာသုံးပါ။ တင်းကြပ်မနေပါစေနဲ့။
• လိမ်းဆေး = Hydrocortisone cream or ointment (Cortaid, Preparation H Anti-Itch Cream) (စတီရွိုက်) လိမ်းဆေး အများဆုံး သုံးတယ်။ Zinc oxide ointment (Desitin, Balmex) လိမ်းဆေး နဲ့ Capsaicin ငရုပ်သီးကနေလုပ်တဲ့ လိမ်းဆေးကိုလဲ သုံးနိုင်တယ်။
• သောက်ဆေး = Antihistimine (Cetrizine) တည ၁ ပြားသောက်ရင် ယားတာ သက်သာမယ်။
Yeast infections (Candidiasis) မှို (ဖန်းဂတ်စ်)
• အမျိုးသမီးတွေမှာ ဖြစ်လေ့ရှိတယ်။ စအိုနေရာသာမက (ဗဂျိုင်းနား) နေရာတွေမှာပါ ယားတယ်။ ဆီးချိုးရှိနေရင် ပိုဆိုးမယ်။
• ဒီမှိုက လူတွေရဲ့ ပါးစပ် နဲ့ (ဗဂျိုင်းနား) မှာ ရှိနေတဲ့အကောင်။ ဒါ့ကြောင့် မွေးလမ်းကြောင်းမှာ ဒီမှိုကြောင့်ရတဲ့ ရောဂါကို STD လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါလို့ မသတ်မှတ်ဘူး။ အမျိုးသမီးတွေမှာ တသက်မှာ အနည်းဆုံးတခါ Vaginal yeast infections ဖြစ်သူပေါင်း ၇၅% ရှိတယ်။ ယားမယ်၊ အဖြူဆင်းမယ်၊ ဒိန်ခဲလို အဖတ်အဖတ်တွေ ဖြစ်တတ်တယ်။ လိင်ဆက်ဆံတဲ့အခါ နာမယ်။
• ဒီဆေးတွေက (ဗဂျိုင်းနား) ထဲ ထည့်ရတယ်။ စအိုနေရာကိုပါ လိမ်းနိုင်တယ်။
o Clotrimazole Vaginal suppositories မွေးလမ်းထည့်ဆေး 100 mg ၆ ည၊ 200 mg ၃ ည။
o Miconazole ointment or 2% cream or 100-200 mg suppository မွေးလမ်းထည့်ဆေး၊ ၃ ည။
o Nystatin 100,000 units vaginal tablets မွေးလမ်းထည့်ဆေး ၁၄ ရက်။
o Fluconazole 150 mg ပြန်ပြန်ဖြစ်နေသူတွေကို တပါတ်တခါ ပေးတယ်။
• အဖြူဆင်းတာနဲ့ပါ တွဲနေတတ်လို့ Metronidazole စားဆေး တခါသောက် ၁ ပြား၊ တနေ့ ၂ ကြိမ်၊ ၇ ရက် သောက်ပါ။
Pinworm တုပ်ကောင် (သန်ကောင်)
• Mebendazole (Vermox) ဆေးကို တကြိမ်တည်းပေးတာနဲ့ ရတာများတယ်။
• တချို့ကို ၁ ပါတ်နေတခါ၊ ဒါမှ မဟုတ် ၂ ပါတ်နေတခါ ထပ်ပေးရတယ်။ တကြိမ်တည်းပေးပြီးနောက် ၃ ပါတ်နေရင် တခါထပ်ပေးသင့်တယ်။ နောက် ၃ ပါတ်နေရင်ရင် တခါ၊ ပေါင်း ၃ ခါပေးရတယ်။ အသက် ၂ နှစ်အောက် ဆေး တဝက်သာပေးပါ။
• Albendazole (Albenza) ကိုလဲ အဲလိုပေးသင့်တယ်။ ဒီဆေးက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနဲနဲပိုတယ်။
• Pinworms သန်ကောင်က ဆီးလမ်း၊ လိင်လမ်းကိုပါ ကူးစက်တာဆိုရင် Mebendazole (Vermox) + Ivermectin (Stromectol) ဆေး ၂ မျိုး တွဲပေးရမယ်။
Ivermectin (Stromectol) ဆေး
• အဓိက အရေပြားအောက်ကနေ ဝင်တဲ့ Strongyloidiasis (Threadworm) သန်ကောင်အတွက် သုံးတယ်။ အသဲနဲ့ အူထဲအထိ ရောက်တယ်။
• Onchocerciasis (River blindness) ရောဂါအတွက်ကိုလည်း ပေးတယ်။ မျက်စိကို ထိခိုက်စေတဲ့ သန်ကောင် ဖြစ်တယ်။
• Onchocerciasis (River blindness) အတွက်ဆိုရင် 3, 6, or 12 လစီခြား ပေးရမယ်။ လူကြီး = 150 mcg/kg တကြိမ်ပေးပါ။ နောက် ၃-၁၂ လမှာထပ်ပေးပါ။
အသက် ၂ နှစ်အောက် ဆေး တဝက်သာပေးပါ။
• Strongyloidiasis (Threadworm) အတွက်ပေးရင် Stool exam ဝမ်းစစ်တာကို ၃ ခါ လုပ်သင့်တယ်။ မတွေ့မှ ကင်းရှင်းပြီလို့ ပြောနိုင်တယ်။ လူကြီး = 200 mcg/kg
• Roundworm သန်လုံးကောင်၊ Lice သန်း၊ နဲ့ Scabies ဝဲ-ယားနာတွေအတွက်လည်း သုံးနိုင်တယ်။
• ဒီဆေးကို အစာမရှိချိန်မှာ ပေးတာကောင်းတယ်။
• ဘေးထွက်-ဆိုးကျိုး = ခေါင်းကိုက်၊ ခေါင်းမူး၊ ကြွက်သားနာ၊ ပျို့၊ ဝမ်းပျက်။